Webbase Upload Software - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Web Development Section - 1 » Portal/Forum/Blog/CMS » Softwares များ
Webbase Upload Software
29-03-2007, 11:25 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Mar 2007
ပို့စ် 16 ခုအတွက် 67 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
မိမိရဲ့ Website တွေကို Upload တင်ချင်ရင်တော့
အများအားဖြင့် FTP Software တွေလိုအပ်ပါတယ်...
တကယ်လို့ FTP Software တွေ မသုံးချင်ဘူး...
Install မလုပ်ချင်ဘူး.. ဒါမှ မဟုတ် သုံးလို့မရဘူးဆိုရင်...
သူ့မှာ Java Upload ကိုသုံးရင်တော့ တကယ့် FTP Software သုံးပြီး Upload လုပ်ရသလိုပါပဲ...
Folder တွေကို သူ့ဘာသာသူဆောက် ၊ သူ့ဘာသာသူ သိမ်း လုပ်ပေးပါတယ်..
Java Upload မသုံးပဲ Upload ဆိုရင်လည်း File တွေအများကြီးကို Upload လုပ်နိုင်ပါတယ်..
File တွေများနေပြီး Folder တွေဆောက်ရမှာ များနေရင်တော့
.zip file ကို upload တင်ပြီးမှ ပြန်ဖြည်ပေးတဲ့ feature လည်းပါပါတယ်...
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ Saturngod အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မျိုးဟန်ထက်, မောင်ပေါ်ဦး, azp09
Visit Saturngod's homepage!
Find More Posts by Saturngod
26-02-2008, 12:48 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jun 2007
ပို့စ် 22 ခုအတွက် 65 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Webbase Upload Software
ဟုတ်ကဲ့... အဲ့ဒီဆိုဒ်ကိုပဲကျွန်တော်သုံးတာများပါတယ်.. ဒါပေမယ့် File Transfer ကတော့ 5M လောက်ပဲလက်ခံတယ်ထင်တယ်ဗျ.. နောက်ဆိုဒ်တစ်ခုကတော့ http://www.01ftp.com ပါ.. net2ftp ကို base ယူပြီးပြန်ဆောက်ထားတာပါ... တခါတလေမှာ 01ftpက net2ftp ထက် ပိုပြီးကြည့်ရကောင်းသလိုပါပဲ... File Transfer လည်းပိုများပါတယ်။
နင်လား၊ ငါလားနဲ့ အချင်းချင်း အချင်းများချိန်မှာ အမှန်တရားက သွေဖယ်သွားတယ်... ငုတ်တုပ်ငြင်းနေသူများအပေါ် ကျော်လွှားလို့..................
12-06-2008, 06:47 PM
ကို saturngod ရေ အစ်ကို့ ရဲ့ makng blog ကိုဖတ်ရလို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ် အစ်ကို ကျွန်တော်က အိမ်မှာ microsoft publisher နဲ့ microsoft front page တွေကို သုံးပြီးတော့ ကိုယ့် web design ဆွဲတာ အဲဒါ file တွေကို upload တင်ရင် ပုံတွေဘာတွေဆို မပေါ်ဘူး ပုံတွေဆွဲထားရင်လဲ မပေါ်ဘူး အဲဒါဘာဖြစ်လို့လဲ အစ်ကို ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်
Find More Posts by သူရထွန်း
14-06-2008, 12:12 PM
အစ်ကို Saturngod ရေ ညီလေး ဖွင့်တာ ဖွင့်လို့မရဘူး သိလား http://www.net2ftp.com ကို လေ ဖွင့်လို့မရဘူး ဗျ
23-07-2008, 03:59 AM
ပို့စ် 43 ခုအတွက် 98 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
http://www.webftp.jbi.in ဒီဆိုဒ်လေးနဲ့ စမ်းကြည့်ပါ သူလည်း net2ftp base ပါပဲ အဆင်ပြေပါစေဗျာ
Find More Posts by ချစ်လား
18-01-2012, 12:35 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Aug 2011
ပို့စ် 67 ခုအတွက် 188 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by သူရထွန်း
ဟုတ်တယ်အစ်ကိုရေ Access has been denied တဲ့။ donut ပြောတဲ့ http://www.01ftp.com နဲ့စမ်းကြည့်ပါလား။ ကျွန်တေိာကတော့ အဲဒါလေးနဲ့ အဆင်ပြေနေတယ်။
Find More Posts by သူစင်ကြယ်
အစ်ကိုတို့ရေ net2ftp ရော 01ftp ရော webftp.jbi.in ရော တစ်ခုမှ ၀င်မရတော့လို့ပါ။ နောက်ထပ်ရှိရင် ပြောပေးကြပါဦးခင်ဗျာ
17-05-2012, 03:36 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jan 2010
ပို့စ် 164 ခုအတွက် 1,263 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်တော့ ဒီကောင်ကိုသုံးတယ် http://www.net2ftp.it/
ဒီထက်ပိုပြီးတော့ရှာချင် ရင် similarsitesearch ကိုသုံးကြည်ပါလား ပုံစံတူဆိုဒ်တွေကိုရှာပေးတာပေါ့ ဥပမာ search box မှာ net2ftp.com လိုရေးပြီးရှာကြည်ပေါ့ သူနဲ့ အလားတူဆိုဒ်ပေါင်းများစွာကိုရှာပေးမှာပါ။ တော်တော် အသုံဝင်တယ် ကျွန်တော်တော် ကိုဂူးပြောလိုသိရတာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ မျိုးဟန်ထက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မျိုးဟန်ထက်
Web Based FTP Clients တစ်ခု လုပ်ထားပါတယ်။ net2ftp script ကို သုံးပြီးလုပ်ထားတာပါ။
အခြားဆိုဒ်တွေ သွားရတာ အဆင်မပြေရင် ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လေးမျာ လာသုံးကြပါ။ www.xmmx.com.nu
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ သူစင်ကြယ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မျိုးဟန်ထက်, g00gle, tu tu
NTFS Data Recovery Software 3.0.1.5 PyaitSone Applications425-01-2011 09:39 AM
Software များကို Crack လုပ်နည်းမျိုးစုံ အကြော်ဆရာ အထွေထွေဗဟုသုတ201-10-2010 10:39 AM
Linux OS အကြောင်းသိကောင်းစရာများ ဟိန်း Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ 51 11-01-2010 10:15 PM
Ware နဲ့ဆုံးသော စကားလုံးများအကြောင်း (Hardware, Software, Spyware and etc…) poekaunglay87 အထွေထွေဗဟုသုတ311-06-2009 05:30 AM
SONY Applications Collection လူဖုန်း Applications 14 27-04-2009 03:31 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 06:25 PM